TANANA MANAMORONA NY RN4 : Mijaly ireo fiara noho ireo mpivarotra sy mpividy anaty lalana
Sahirana ireo mpampiasa lalana amin’iny lalam-pirenena fahaefatra iny noho ny tsena ataon’ireo tanàna maromaro anaty lalana. 8 mai 2018
Anisan’izany ny ao Antanimbary sy ao 5/5 Berivotra. Ny lalana no lasa tsena, ka anaty lalam-pirenena no mifanaretsaka ny rehetra, tsy kely tsy lehibe. Feno elobe ihany koa ny sisin-dalana ka tsy afaka mifanena ny fiarakodia roa. Ireo fiarabe ihany koa dia mananosarotra ny fandalovany.
Ahiana ny hisian’ny loza mahatsiravina satria na mandeha mora aza ny mpamily dia ahiana ny hisy hianjera any ambany fiara noho ny fifanosehana. Misy zandary mandehandeha amin’ny tsena saingy tsy mandamina olona sy fifamoivoizana mihitsy. Marihina moa fa anisan’ny asan’ny zandary ny fandaminana ny fifamoivoizana ohatra izao saingy tsy ataon’izy ireo izany ankehitriny.
Gaboraraka tanteraka. Efa maro ireo mitaraina satria dia 30mn farafahakeliny vao tafala tao anaty olona ny fiarakodia izay mampiasa ny lalana. Teo aloha dia nisy ny famatsiana fanamboarana tsena nataon’ny FID. Saika efa manana tsena daholo ireny tanàna ireny saingy ny mahagaga dia mbola manenjika sisin-dalana avokoa nefa tsy ny mpampiasa lalana no mpanjifan’izy ireo fa izy samy tompon-tanana sy ny manodidina ihany. Ilaina, araka izany, ny fandraisan’ireo tompon’andraiki-panjakana andraikitra amin’ny fandaminana ny ohatra izao, mba tsy hiitatra sy hanakorontana ny hafa.
Voaantso teny amin’ny biraon’ny Polisy tetsy Tsaralalàna indray CLEMENCE RAHARINIRINA (2463) 5 mars 2021 Namoahana “Filazana Fikarohana” i Marco Randrianisa FIANTSOANA “ACTE ISOLÉS” (912) 2 mars 2021 Tsy hiara-dalana amin-dRavalomanana intsony ? FANAMBARAN’NY ANTOKO MFM (213) 2 mars 2021 Mikononkonona fanakorontanana ireo vehivavy RMDM ? HETSIKY NY VEHIVAVY 8 MARSA ANY DIEGO (114) 2 mars 2021 Jiolahy naman’i Del kely miisa fito voasambotra KIDNAPPING TAO AMBAKIRENY (110) 2 mars 2021 Voasoroka ny korontana nokasain’ ny RMDM hatao ANALAKELY - AMBOHIJATOVO (97) 2 mars 2021